Famolavolana mekanika - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Fumax Tech dia manolotra serivisy famolavolana injeniera mekanika isan-karazany. Azontsika atao ny mamorona ny famolavolana mekanika feno ho an'ny vokatrao vaovao, na afaka manamboatra sy manatsara ny famolavolana mekanika misy anao izahay. Azontsika atao ny manome fahafaham-po ny filanao famolavolana mekanika miaraka amina ekipa injeniera mekanika mahay be sy manam-pahaizana manana traikefa betsaka amin'ny fampandrosoana vokatra vaovao. Ny traikefa injeniera momba ny fifanarahana mekanika dia miaraka amina sokajy vokatra isan-karazany, ao anatin'izany ny vokatra ho an'ny mpanjifa, ny fitaovana fitsaboana, ny vokatra indostrialy, ny vokatra fifandraisana, ny vokatra fitaterana ary ny vokatra hafa.
Manana rafitra 3D CAD manara-penitra izahay amin'ny famolavolana mekanika, ary koa fitaovana / fitaovana isan-karazany amin'ny famakafakana mekanika sy fitsapana. Ny fampiarahanay ireo injeniera efa za-draharaha sy fitaovana famolavolana dia mamela ny Fumax Tech hanolotra anao ny famolavolana mekanika nohamafisina ho an'ny fiasa sy ny famokarana.
Fitaovana rindrambaiko mahazatra: Pro-E, Works matevina.
Formata fisie: dingana
Ny dingam-pampandrosoana mekanika antsika dia matetika misy ireto manaraka ireto:
1. Fepetra takiana
Miara-miasa amin'ny mpanjifanay izahay mba hamaritana ireo fepetra takiana amin'ny mekanika amin'ny vokatra na rafitra manokana. Ny takiana dia misy ny habeny, ny endri-javatra, ny fandidiana, ny fahombiazany ary ny faharetany.
2. Famolavolana indostrialy (ID)
Ny endrika ivelany sy ny endriny ivelany ho an'ny vokatra dia voafaritra, ao anatin'izany ny bokotra sy ny fampisehoana. Ity dingana ity dia atao mifanandrify amin'ny fampandrosoana ny maritrano mekanika.
3. Maritrano mekanika
Izahay dia mamolavola ny rafitra mekanika avo lenta ho an'ny vokatra. Ny isa sy ny karazana faritra mekanika dia voafaritra, ary koa ny fifandraisana amin'ny Printer Circuit Boards sy ny faritra hafa amin'ny vokatra.
4. Fandaminana CAD mekanika
Izahay dia mamorona ny famolavolana mekanika amin'ny an-tsipiriany ny singa mekanika tsirairay ao amin'ny vokatra. Ny 3D MCAD layout dia mampifandray ny faritra mekanika rehetra ary koa ny subassemblies elektronika amin'ny vokatra.
5. Fiangonan'ny prototype
Aorian'ny nahavitanay ny lamina mekanika, namboarina ireo faritra prototype mekanika. Ireo faritra dia mamela ny fanamarinana ny famolavolana mekanika, ary ireo faritra ireo dia atambatra amin'ny elektronika mba hahatonga ireo prototypes miasa amin'ilay vokatra. Manome pirinty 3D haingana na santionany CNC haingana tahaka ny 3 andro izahay.
6. Fitsapana mekanika
Ny faritra mekanika sy ny prototypes miasa dia voasedra hanamarinana fa mahafeno ny fepetra takiana. Atao ny fanandramana fanarahan-dalàna an'ny maso ivoho.
7. Fanohanana amin'ny famokarana
Rehefa voasedra tanteraka ny famolavolana mekanika dia hamorona famolavolana famolavolana mekanika ho an'ny injenieran'ny fumax fitaovana / famolavolana hanamboarana ny bobongolo izahay, mba hamokarana bebe kokoa. Manamboatra fitaovana / bobongolo ao an-trano izahay.